मैले विवाह नगर्नुमा यत्ति धेरै प्रश्न किन ? « Bagmati Samachar
२४ आश्विन २०७५, बुधबार १४:५२
काठमाडौं । मेरो साथीले सोध्यो ‘अझै पनि उसकै बारेमा सोचिरहेका छौ ?’ मैले कुनै उत्तर दिइन ।
ऊ बोल्यो ‘तिमी पागल नै हुन सक्छौ । तिम्रो ‘अफेयर’ वर्षौ पहिले सकिएको थियो । तर तिमी जिन्दगीमा अगाडी बढ्न सकेनौ । अब छोड, अगाडी बढ । तिमी समयसँगै समझदार हुनु पर्छ ।’
मैले भने ‘के।।।तिम्रो समस्या के हो ? यो मेरो रुचिको विषय हो ।’
योे कहानी मेरो बितेको समय र आजको समयमा जोडिएको छ । मायामा असफल भएपछि मैले एक्लै अर्थात सिङ्गल बस्ने निर्णय गरें । यो निर्णय त्यो समाजको लागि एउटा ठूलो प्रश्न बन्यो । जोसँग मेरो सधंै को नाता छ ।
विवाहित वा अविवाहित ? सिङ्गल वा कमिटेड
एउटालाई त यो जान्न धेरै चासो छ के मेरो रुचि पुरुषहरुमा छ ? म भन्छु प्यारो साथी, अब समझदार होऊ । यदि यस्तो हुन्थ्यो भने म कुनै पुरुषसँग बस्दथे ।यदि मैले यस्तो प्रश्नको उत्तर रिसाएर दिए भनें तुरुन्त मलाई साथीत्व नभएको घोषणा गरिन्छ । त्यसैले म चुप रहन्छु ।
एउटा साथीले मलाई भन्यो म यस्तो मानिससँग जोडिए जो मेरो जस्तो स्थितिमा छ । मैले सोधे आर्थिक स्थितिमा वा भौगोलिक स्थितिमा रुहोइन ती मानिस जसले सही समयमा विहे गरेनन् । तिमीलाई थाहा छ । तिमीहरु एकअर्कालाई बुझ्न सक्छौ । बाँकी जीवन साथसाथै राम्रोसँग बिताउन सक्छौ ।
फेरी मेरो अगाडी पछाडी हेरेर मलाई एक्लै देखेपछि उनी लाइनमा आउँछिन । ओ अहिलेसम्म सिङ्गल नै छौ १मलाई लाग्छ अब मेरो लागि समय आयो । जब यी कुराहरुमा रोक लगाइदिऊँ, धेरै सोचेर मानिसहरुसँग कुरा गरुँ र समारोहमा जाऊँ ।
जब म छुट्टिपछि आफ्नो गृहनगरबाट फर्केर अफिस आउँछु म जानीजानी खाली हात आउँछु । मेरो गृहनगरको चर्चित मिठाई ल्याउदिन । किनकी म त्यही प्रश्नबाट बच्न चाहन्छु कुनै खास खबर छ क्या ? साधारणतया यो खास खबरको मतलब हुन्छ विवाह हुनु वा घरमा बच्चा हुनु ।
( एक भारतीय अविवाहित पुरुषको भोगाई, बिबिसी हिन्दीबाट अनुवाद)